Genocide Crime ခေါ် လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုကြီး (အမြည်း) | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« DVB’s Bigot Reporter Inciting Racism
အိုဘားမားရဲ့ မြန်မာပေါ်လီစီကို ပြောင်းဖို့ တောင်းဆို (BBC) »
Genocide ခေါ် လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုကြီးသည် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေအရ တားမြစ်ထားသော ရာဇ၀တ်မှုကြီး ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ စစ် အာဏာရှင်များ စိတ်ကြိုက် ပြဌာန်းရေးစွဲထားသော နာဂစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အပါအ၀င် အခြားဥပဒေများအရ တားမြစ်ထားသော ရာဇ၀တ်မှုကြီး အလျဉ်း မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် Genocide ခေါ် လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှု ကြီးအကြောင်း နားလည်ရန် နိုင်ငံတကာဥပဒေကို နားလည်ဖို့ လိုပါလိမ့်မည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ သာမာန် ပြည်သူများကို ထားဘိဦး။ ဥပဒေပညာရှင်ဟု အမည်ခံ ထားသူများ၊ နိုင်ငံကျော်ရှေ့နေကြီး များသည်ပင်လျှင် စစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက် ၏ အညွှန့်ချိုးခဲ့မှုကြောင့် နိုင်ငံတကာဥပဒေများနှင့် ကင်းကွာလျှက် ရှိကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဥပဒေပညာရှင်များ၊ တရားသူကြီးများ၊ ရှေ့နေကြီးများ အနက်မှ အများစုကြီးမှာ နိုင်ငံတကာဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့် ပညာရပ်များကို မူး၍ပင် မရှုခဲ့ဖူးသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။
Genocide ဆိုသည့် စကားလုံးအား “လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှု၊ လူမျိုး တစ်မျိုးလုံး ကို အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှု”ဟု မြန်မာလို အကျယ်တ၀င့် ပြောဆို သုံးနှုန်း ရေးသားကြသည်။ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု ဝေါဟာရကို တိကျပြီး အသေး စိတ် အနက်အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုရာတွင် ပညာပညာရှင်များအကြား ကွဲလွဲမှုများတော့ ရှိနေသည်။ သို့သော် နိုင်ငံတကာဥပဒေ ဖွင့်ဆိုချက်အရ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံ ပြဌာန်းချက်ပါ ‘လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုအား ကာကွယ်ခြင်းနှင့် အပြစ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ’ CPPCG ပါ အပိုဒ် (၂) နှင့် (၃) တွင်မူ တိတိကျကျ၊ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုထားသည်။
လူမျိုးတစ်မျိုးလုံးကို အမျိုးပြုတ်သွားအောင် အကုန်လုံး သတ်ဖြတ်ခြင်း မဟုတ် သော်လည်း လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကို ကျူးလွန်နိုင်ကြောင်းကို လူမျိုးတုန်း သတ် ဖြတ်မှု ကျူးလွန်မှုအပေါ် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေဆိုင်ရာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များက ခိုင်ခိုင်မာမာ၊ တိတိကျကျ ဖော်ပြထားသည်။ Genocide ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံသား၊ လူမျိုးစု၊ မျိုးနွယ်စု၊ (သို့မဟုတ်) ဘာသာရေးနှင့် ဆိုင်သော အုပ်စုတစ်ခုခု၏ အားလုံးကို (သို့မဟုတ်) အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခုကို (အချို့ကို) ဖျက်ဆီးပစ်ရန် ရည် ရွယ်၍ ကျူးလွန်သော အောက်ဖော်ပြပါ မည်သည့် ရာဇ၀တ်ကျူးလွန်မှုကိုမဆို ဆိုလိုသည်။
(၁) လူအုပ်စုတစ်စု၏ အဖွဲ့ ဝင်များကို သတ်ဖြတ်ခြင်း။
(၂) လူအုပ်စုတစ်စု၏ အဖွဲ့ဝင်များကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်သော်လည်းကောင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသော်လည်းကောင်း ပြင်းထန်စွာ အန္တရာယ်ပြုခြင်း။
(၃) လူအုပ်စုဝင်များ၏ လူနေမှုဘဝ အခြေအနေများကို ထိခိုက်နစ်နာ အောင် တမင်တကာ ရည်ရွယ်၍ အုပ်စုတခုလုံးကိုဖြစ်စေ (သို့မဟုတ်) တစိတ်တစိတ် တစ်ပိုင်းကိုဖြစ်စေ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့် ထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်း။
(၄) လူအုပ်စုဝင်များအတွင်း ကလေးမွေးဖွားမှု (မျိုးပွားမှု၊ လူဦးရေတိုးပွားမှု)ကို တားဆီးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လိုက်နာချက်များ သတ်မှတ်၍ လိုက်နာစေခြင်း။
(၅) လူအုပ်စုတစ်ခုအတွင်းမှ ကလေးများအား တခြားလူအုပ်စုတစ်ခုအတွင်း သို့ အတင်းအဓမ္မ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းစသည့် လုပ်ရပ်များကို ပြုလုပ် ကျူးလွန် ခြင်းသည်ပင် Genocide ရာဇဝတ်မြောက်ကြောင်း ပြောဆိုထားသည်။ ကျူး လွန်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကလေးများကို အဓမ္မ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဆိုသည်မှာ ကလေးများ (တစ်ဦးဖြစ်စေ၊ တစ်ဦးထက်ပိုသည်ဖြစ်စေ) အား အဓမ္မ ပြောင်းရွေ့ရာတွင် အင်အားသုံး၍ဖြစ်စေ၊ အကြမ်းဖက်မှုကို ကြောက်ရွံ့သောကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ခြိမ်းခြောက်မှု၊ ချုပ်နှောင်ထား ခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခြင်း (သို့) အခြား နည်းလမ်းများဖြင့် အကျပ်ကိုင်ခြင်းတို့ အကျုံးဝင်သည်။ ကလေးသူငယ်များ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် ကလေး သူငယ်ဟုဆိုရာတွင် အသက် ၁၈ နှစ်အောက်ကို ဆိုလိုသည်။
အထက်ပါ ဖော်ပြချက်များထဲမှ အချက်တချက်ချက်ကို ကျူးလွန်လျှင် (သို့) တစ်ချို့ကို ကျုးလွန်လျှင် (သို့) အားလုံးကို ကျူးလွန်လျှင် Genocide ဟု ခေါ်သည့် လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်ပြစ်မှုကို ကျူးလွန်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဆိုလျှင် နအဖသည် အဆိုပါ ၅ ချက်ထဲမှ မည်သည့် အချက်ကို ကျူးလွန်၍ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းလာ ကမ္ဘာ့မော်ကွန်းဝင် ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားများ အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံမှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တိုင်းရင်းသား (၀ါ) နိုင်ငံသားများအပေါ်တွင် Genocide ရာဇဝတ်ပြစ်မှုကို ကျူးလွန်နေသနည်း။ တစ်ချက် (သို့) တစ်ချို့ (သို့) အားလုံးကို ကျူးလွန်နေ၍လော။
ထို့ကြောင့် မြန်မာအစိုးရနှင့် ၎င်းတို့၏ လက်ပါးစေ အကြမ်းဖက်သမားများအနေနှင့် မြန်မာ့စွယ်စွယ်ကျမ်းလာ ကမ္ဘာ့မော်ကွန်းဝင် ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားများ အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံမှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် လူမျိုးစုများအား လူမျိုးတုန်း သတ် ဖြတ်ခဲ့ခြင်း ရှိ၊ မရှိကို အထက်ဖော်ပြပါ စံနှုန်း (၅) ချက်ဖြင့်သာ တိုင်းတာရန် လိုပါ သည်။ ဤနေရာတွင် ဥပမာအချို့အား အမြည်းသဘောမျိုးဖြင့် တင်ပြပေးသွား ပါမည်။
၃-၆-၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ တောင်ကုတ်မြို့မှာ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာ အကြမ်းဖက်သမား (၃၀၀) ကျော်မှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တိုင်းရင်းသား မြန်မာ မွတ်စလင်မ် (၁၀) ဦးကို ပက်ပက်စက်စက်၊ ရက်ရက်စက်စက်၊ လူမဆန်စွာ သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ယင်းအမှုကြီးနှင့်ပတ်သက်သည့် သက်သေခံ ဓါတ်ပုံများ ကို အောက်ပါလင့်ခ်တွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
(၂) လူအုပ်စု တစ်စု၏ အဖွဲ့ဝင်များကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်သော်လည်းကောင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသော်လည်းကောင်း ပြင်းထန်စွာ အန္တရာယ်ပြုခြင်း။
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့တွင် ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာအကြမ်းဖက်သမားများမှ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် တိုင်းရင်းသား ရိုဟင်ဂျုာလူမျိုး (၂) ဦးကို ပက်ပက်စက်စက်၊ ရက်ရက် စက်စက်၊ လူမဆန်စွာ သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းသတ်ဖြတ်ခံရသူများ၏ ယောက်ဖ တော်သူက ငိုကြီးချက်မနှင့် အသက်နှင့်ရင်းပြီး၍ သေမထူး၊ နေမထူးဘ၀မို့ ဖွင့်ဟ ထားသည်ကို အောက်ဖော်ပြပါလင့်ခ်ရှိ ဗီဒီယိုမှာ ကြည့်ရှုပါ။ နောက်ထပ်ပေးစရာ ထောင်ပေါင်းများစွာသော အထောက်အထားများ ရှိနေပါသေးသည်။
READ ALL AT THE SOURCE HERE
This entry was posted on March 2, 2013 at 1:01 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.